Mega Lifesciences is committed to provide quality products & services to our customers & consumers through constant improvement and innovation. Mega Lifesciences isaThinking Organization that change...
To be the trusted partner of choice for the leading service providers, government agencies and enterprises by providing "SAFE, RELIABLE & INNOVATIVE" services and solutions across multiple...
Our European management, R&D, and quality control, paired withapolicy of zero-compromise on crafting and materials used, give our customers the guarantee that the modular house or office they buy ha...
Contract and Vendor Manager TIP
Commission Dealer Engagemen ... TIP
Pricing Senior Manager TIP
Sales Executive TIP
Admin Officer TIP
Digital Marketing Manager TIP
Sales Consultant TIP
Junior English Teacher TIP
Hotel & Restaurant Jobs(226)
Customer Service & Call Centre jobs(192)
Driver, Security & Cleaning jobs(156)
Logistics & Supply Chain Jobs(154)
Media,Digital & Creative jobs(144)
Transport & Logistic jobs(141)
IT & Telecoms jobs(126)
Banking & Insurance jobs(113)
Education, Childcare & Teaching jobs(105)
NGO, Charity & Voluntary jobs(100)
Business Management Jobs(96)
Hospitality & Tourism jobs(84)
Audit & Taxation Jobs(78)
Health & Medicine jobs(78)
Financial Management Jobs(73)
Senior Management jobs(73)
Project Management Jobs(67)
Web Developer Jobs(65)
Arts, Crafts, and Design(62)
Quality Assurance Jobs(56)
Mechanical/Automotive Engineering Jobs (54)
Construction & Property jobs(50)
Security & Safety jobs(47)
Food & Beverages/Bakery Jobs(46)
Electrical Engineering Jobs(37)
Architecture & Design jobs(34)
Purchasing/Material Management Jobs(34)
Sales Management jobs(34)
Maintainance and Production Jobs(24)
Legal & Compliance jobs(22)
Sales - Engineer/Tech/IT Jobs(19)
Logistics / Distribution / Delivery(17)
Food and Beverage Production jobs(15)
Tech Support & Service jobs(13)
Advertising/Media Planning Jobs (11)
Secretarial Jobs (11)
Computer / IT / Developer jobs(6)
Advertising and PR Services(4)
Travel / Tourism / Transportation(4)
Oil/Gas Engineering Jobs (3)
Promotions / Merchandising(3)
Public Sector & Government jobs(3)
Airline & Automobile jobs(2)
Heavy Equipment /Machinery Operator Jobs(2)
Motoring & Automotive jobs(2)
Multilengual & Translator jobs(2)
Science & Research jobs(2)
Cashier / Cash Collection(1)
Chef / Baker(1)
Executive / Assistant / Representative(1)
Housemaid / Housekeeper / Cleaner(1)
Top Management Jobs (1)
Sales, Marketing and Advertising(1)
Myanma Posts & Telecommunications - MPT(120)
Fortune International Limited(92)
World Vision Myanmar(88)
TAW WIN ZARMANI GROUP Co.,Ltd(80)
IGE Group of Companies(70)
IKBZ Insurance Co., Ltd.(69)
CB BANK PLC(66)
Shwe Than Lwin Media Co., Ltd.(66)
Star Moe Yan Group of Co., Ltd.(53)
Asia Beverages Co., Ltd.(50)
Myanmar Pouchen Co., Ltd.(47)
ABC Convenience Store [Active Business Consolidati...(38)
SP Bakery Myanmar(36)
Global Technology Co., Ltd (Global Net)(35)
I.E.M Co., Ltd.(33)
လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ဟာ မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိဖို့ဆိုတာ အရေးကြီးတဲ့ အရာတစ်ခုဆိုတာ ငြင်းဆန်နိုင်မယ်မထင်ပါဘူး။ ယုံကြည်မှုရှိခြင်းရဲ့ နောက်ကွယ်မှာလည်း အကြောင်းအရာများစွာ လိုက်ပါလာပါတယ်....
ကိုယ်ပိုင်အားလပ်ချိန်ကိုမထိခိုက်စေတဲ့ အလုပ်ကြိုးစားသူတစ်ယောက်ဖြစ်လာစေဖို့..... သင့်ဘဝရဲ့ နောက်ဆုံးနေဝင်ချိန်မှာ အတိတ်ကို ပြန်လည်စဉ်းစားလိုက်ရင် ပျော်ရွှင်မှုရစေမယ့်အရာတွေကတော့ ဝန်ထမ်းကောင်းဆုတွေ၊ ဝန်ထမ်းကောင်းလက်မှတ်တွေမဟုတ်ပါဘူး။ ဖခင်မိခင်ကောင်းတစ်ယောက်၊ မိသားစုအတွက်တာဝန်ကျေခဲ့တဲ့ အိမ်ထောင်ဖက်တစ်ယောက်၊ မိဘတွေကိုသိတတ်ခဲ့တဲ့ သားသမီးလိမ္မာတစ်ယောက်၊ အစရှိတဲ့အရာတွေကသာ သင့်ကို သင့်ဘဝနေဝင်ချိန်မှာ ပြန်လည်ခံစားကြည်နူးစေမယ့်အရာတွေပါ။
ဒီတစ်ခါကတော့ Talent တွေကို ဘယ်လို Retain လုပ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကို တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ မိမိတို့ Organization တိုးတက်ဖို့ဆိုရင် မိမိမှာရှိတဲ့ Talent တွေကို Retain လုပ်ဖို့က အရမ်းကို အရေးကြီးပါတယ်။ အဲ့တော့ Talent တွေကို Retain လုပ်မည့်အကြောင်းကို Audio မှာ နားထောင်လိုက်ပါ။ ရိုသေလေးစားစွာဖြင့် www.jobsinyangon.com
Top 10 in-demand skills in 2017 to develop yourself
Career & Development- Part-I
လူတစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက် Career ဆိုတာက အရေးကြီးပါတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့အညီ Development ကိုပါလုပ်ဆောင်ကြရပါတယ်။ အဲ့ဒီတော့ JobsInYangon.Com နဲ့ City FM တို့ ပူးပေါင်းတင်ဆက်နေကြဖြစ်တဲ့ Career Knowledge အစီအစဉ်မှာ ဆရာကိုလှဘုန်းအောင်မှ Career & Development အကြောင်းကို ဆွေးနွေးတင်ဆက်သွားပါတယ်။ Career & Development ကို ဘယ်လိုရွေးချယ်ပြီး ကောင်းမွန်အောင်လုပ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကို နားထောင်လိုက်ကြပါအုံးနော်။ လေးစားစွာဖြင့် www.jobsinyangon.com
သင်အလုပ် အင်တာဗျူးဖြေနေစဉ် ဘာတွေပြောသင့်သလဲဆိုတဲ့ အကြံအဥာဏ်များစွာရှိပါတယ်။ ဘာတွေကို မပြောသင့်သလဲ ဆိုတာကတော့..........
လက်ရှိအင်တာဗျူးတွေမှာ လေ့လာမှုတွေအရ မိမိရဲ့ CV ပါအချက်အလက်များ အပေါ်အခြေခံပြီးမေး မြန်းခြင်းအပြင် Logic (တွေးခေါ်မှု)ဆိုင်ရာ Teamwork (အသင်းအဖွဲ့လိုက်ဆောင်ရွက်ခြင်း) ဆိုင်ရာ Problem Solving (အခက်အခဲများကိုဖြေရှင်းခြင်း) ဆိုင်ရာမေးခွန်းတွေ ကိုမေးမြန်းလာကြတာကိုတွေ့ ရပါတယ်။ အင်တာဗျူးဖြေသူများ ဟာလည်းဖော်ပြပါအကြောင်းအရာ တွေထဲက တစ်စုံတစ်ခု (သို့) အားလုံးကို ကြုံတွေ့ကောင်းကြုံတွေ့ ရမယ်ဆိုတာကတော့အသေအချာပါ။ သည်အပတ်မှာတော့ Fan များအတွက် အင်တာဗျူးတစ်ခုအတွက် ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ် သည့် အချက်များကိုတင်ဆက်သွားမှာပါ။